कोरोना निम्त्याएको कहर : आमाको शव चितामाथि, अस्पतालमा छोराको मृत्यु !! | सुदुरपश्चिम खबर
कोरोना निम्त्याएको कहर : आमाको शव चितामाथि, अस्पतालमा छोराको मृत्यु !!
विराटनगर : कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेकी विराटनगर महानगरपालिका–३ की ६० वर्षीया वृद्धा महिलाको बुधबारसाँझ विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालमा मृत्यु भयो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार कोरोना पुष्टि भएर श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि वैशाख १६ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अवस्था गम्भीर बनेपछि परिवारका सदस्यले अस्पताल र चिकित्सकको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको हो।
बर्षाले बाजुरा जिल्लामा विद्युत अनियमित
पहिरोले गुल्मीमा दुई घर भत्किए, एकजना घाइते
अस्पतालका लेखा अधिकृत सुवास पोखरेलका अनुसार उपचारकै क्रममा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकी वृद्धा महिलाको भेन्टिलेटरमा साँझ ७ः३० बजेतिर मृत्यु भएको हो। वृद्धामा मधुमेह सम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको पोखरेलले बताए।
विराटनगरको हाटखोलास्थित परमविश्रान्ति घाटमा अन्त्येष्टि गर्ने तयारीअनुरुप अस्पतालबाट उठाएर शव घाटमा पु¥याइयो। कोरोनाका कारण वृद्धा महिलाको मृत्यु भइसक्दा कोरोना संक्रमित उनका ४२ वर्षे छोराको पनि नर्सिङ होममै गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको थियो। उनी विराटनगरका नामुद सुनचाँदी व्यवसायी हुन्।
उनका अनुसार संक्रमितले भनेका बेला आईसीयू र भेन्टिलेटर पाइरहेका छैनन्। अस्पतालहरुमा कोभिड बेड पूरै भरिएर उपचार पाउननसक्दा बिरामी छटपटाइरहेको दृष्य निक्कै दर्दनाक रहेको उनले सुनाए। ‘अवस्था निक्कै जर्जर बनिसकेको छ। कोरोना संक्रमित मेरी पनि आमा उपचाररत अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘चिकित्सकले आवश्यक प¥यो भनेपछि आमाका लागि रगतको जोहो गर्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा आएको छु। आमाको उपचारसँगै पीडामा परेका अरु संक्रमितलाई सकेजति सहयोग गरिरहेको छु।’